फेरि मन्त्रिपरिषद विस्तार २ नयाँ मन्त्रि नियुक्त, नामलिस्ट सहित — Imandarmedia.com
फेरि मन्त्रिपरिषद विस्तार २ नयाँ मन्त्रि नियुक्त, नामलिस्ट सहित
काठमाडौ। सबैलाई चकित पार्दै प्रधानमन्त्रि देउवाले २ नयाँ मन्त्रि नियुक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कै पार्टीमा मन्त्रको लागि हानथाप भएको थियो अनन्त: मन्त्रको नाम्लिस्ट प्रधानमन्त्री देउवाले गोजीबाट निकालेका हुन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ६ महिनामा मन्त्री पाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर र नियुक्तिपछि उद्योग मन्त्रालयले मन्त्री पाएको हो।
कानुन मन्त्री रहेका दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। कानुन मन्त्रीमा गोविन्द बन्दीलाई नियुक्त गरी बडूलाई उद्योग मन्त्री बनाइएको हो।
गत २४ असोजमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री जेन्द्रबहादुर हमालले पदबाट राजीनामा दिएपछि सो पद रिक्त रहँदै आएको थियो। तेस्तै,अधिवक्ता गोविन्द बन्दी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्।
बिहीबार आफूलाई कानुनमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको बन्दीले जानकारी दिए।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बन्दीलाई कानुनमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन्।
नवनियुक्त मन्त्री बन्दीका अनुसार बिहीबार दिउँसो २ बजे पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण कार्र्यक्रम छ। बन्दी संघीय संसदमा सदस्य छैनन्। ६ महिनाभित्र संघीय संंसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा स्वतः उनको मन्त्री पद गुम्नेछ।
गुमनाम वामदेव राजनीतिक ‘इन्ट्री’ मार्ने दाउमा: नेपालको राजनीतिमा हक्की स्वभावको छवि बनाएका वामदेब गौतम पछिल्लो समय गुमनाम छन्। उनी आजभोलि के गर्दै छन् भन्ने चासो विषय बनेको छ।
आजभोलि गौतमको दिनचर्या कसरी बितेको छ? उनी किन राजनीतिबाट ओझेल परे? राजनीतिमा चासोे राख्नेहरुका लागि जिज्ञासाको विषय बनेको छ। नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनका अगुवा गौतम तत्कालीन मालेका संस्थापक मध्येका एक हुन्।
मुलुकको गृह प्रशासन पटक–पटक सम्हालेका गौतम राजनीतिक क्रियाकलापले बारम्बार विवादमा आइरहने पात्र हुन्। उनकै अस्थिर र ढुलमुले स्वभावको कारण नेकपा बिभाजन भएको आरोपसमेत कतिपय नेताहरुले लगाउने गर्दछन्।
कुनै बेलाका शक्तिशाली यी नेता आजभोलि एक्लिएका छन्। उनलाई ०५४ सालमा साथ दिएका पुर्नगठित मालेका नेताहरुसमेत उनीसँग छैनन्। राजनीतिमा एक्लो बृहस्पति जस्तै देखिएका वामदेव अरु नेतालाई चुनावको चटारो हुदाँ उनी भने गुमनाम छन्।
केही समय अगाडि उनले पार्टी खोल्न लागेको भन्ने हल्ला समेत चलेको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै वामदेवसक्रिय हुनुपर्नेमा किन फुर्सदिलो बनेका होलान्?
नेकपाकालमा नौ सदस्यीय सचिवालय हुँदा निर्णायक रहेका गौतम नेकपा बिभाजनसँगै स्पष्ट अडान र कित्ताकाट गर्न नसक्दा ओझेलमा परेको उनका निकटस्थहरु बताउँछन्।
गौतमका समकालीन नेताहरु प्रधानमन्त्री भएसँगै उनको एकमात्र ध्येय प्रधानमन्त्री बन्ने रहेको र त्यसको लागि उनले अनेक प्रयत्न समेत गरेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा नभएको होइन।
नेकपा एकता अभियान सुरु गरेका गौतमको अभियानले अपेक्षाकृत गती लिन समेत सकेन। सर्वोच्चको माओवादी र एमाले पुर्ववत अबस्थामा फर्काउने फैसलाले उनको नेकपा एकता अभियानको उपादेयता नै समाप्त भयो।
उनको आफ्नै पार्टी समेत बिभाजित भएसँगै पुनः एमाले एकता अभियान गठन गरी केही समय राजनीतिक गतिबिधि गरेका वामदेव पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटारमा पुगेसँगै सक्रिय राजनीतिक पुनरावगमनको अड्कलबाजी समेत भएको थियो। तर लामो समयसम्म उनको सक्रियता देखिएन।
अवको राजनीतिक पुनरागमन गौतमको लागि त्यति सहज भने देखिँदैन। उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रहोउञ्जेल एमालेमा नआउने सार्वजनिक घोषणा गरिसकेका छन्।
माधव नेपालको पार्टीमा उनको बैचारिक असहमति छ । अन्य पार्टीमा प्रवेश गरेर उनको राजनीति मजबुद हुने अबस्था रहदैन। नयाँ पार्टी खोलेमा जनताले पत्याइहाल्ने अबस्था छैन।
उनको आगामी राजनीति र राजनीतिक सक्रियताको बिषयमा जानकारी लिन उनको सचिवालयका प्रमुख स्वकीय सचिव दिपक टमटालाई सम्पर्क गर्दा उनले राजनैतिक सक्रियताको तयारीमा रहेको जानकारी डिसी नेपाललाई दिएका छन्।
गौतम आफ्ना निकटस्थहरुसँग केही समसामयिक बिषय र नयाँ राजनीतिक परिदृश्यको बिषयमा जानकारी लिइरहेको उनले बताए। निकट समयमै सकृय राजनीतिमा पर्दापण हुने टमटा ठोकुवा गर्छन्।
उनका अनुसार गौतमले नयाँ पार्टी खोल्नेसम्मको तयारीमा रहेका थिए, तर नजिकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनले रोकिएको उनी बताउँछन्।
उनले भने, ‘नयाँ ढंगले जानुपर्छ भन्नेमा उहाँ प्रष्ट हुनुहुन्छ। अध्ययन र तयारीको काम चलिरहेको छ।
अहिले नै ठोस परिणाम आइसकेको छैन। तसर्थ अहिले नै यसै भन्न सकिने अबस्था छैन।’उनका अनुसार अहिले सैद्धान्तिक अध्ययन र पार्टी निर्माणको मोडालिटीको बिषयमा अध्ययन र अनुसन्धानमै गौतम केन्द्रित रहेका छन्।
आगामी चुनावमा गौतमको भुमिकाको किषयमा प्रश्न गर्दा गौतमकै भनाइ उद्धत गर्दै टमटाले म आफै त पार्टीमा छैन सहि र इमान्दार मानिसलाई भोट दिनु भनी भन्ने गर्दछन्। गौतम राजनीतिमा गुमनाम नभएको टमटाको दाबी छ्।
राजनीतिमा जिम्मेवारी सहित सक्रिय नभएको मात्रै हो गुमनाम होइन उहाले राष्ट्रिय महत्वको बिषयमा विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै आउनु भएको छ जस्तो एमसीसी लगायत अन्य बिषयमा उनले भने।